Bilaogera Ejyptiana Faharoa Voasambotra Tao Anatin’ny Herinandro · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Ejyptiana Faharoa Voasambotra Tao Anatin'ny Herinandro
Voadika ny 18 Aogositra 2017 11:09 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Febroary 2009 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Tsy ampy herinandro akory, bilaogera Ejiptiana roa no voasambotra. Nitranga omaly 9 febroary 2009 ny fisamborana farany, raha niditra an-keriny tao amin'i Diaa Eddin Gad, tompon'ny bilaogy Sawt Ghadib (Feo Tezitra) ny mpitandro ny filaminana. Hatreto, tsy mbola nanambara ny anton'ny fisamborana azy na ny toerana nitanana azy ny polisy.
“Nanjary lasibatra voalohan’ ny manampahefana mpitandro filaminana any Ejipta ny bilaogera ary tsy ara-dalàna ireo fanafihana rehetra ireo na natao teo ambanin'ny firenena latsaka ankaterena aza”, hoy ny Tambajotra Arabo Misahana ny Vaovaon'ny Zon'OIombelona (ANHRI) tamin'ny fanambarana iray.
Nitaky tamin'ny tatitra nalefan'izy ireo tany amin'ny mpampanoa lalàna ireo mpisolovava ao amin'ny sampan-draharahan-dalàna ao amin'ny ANHRI ho fanohanana ny fahalalahana sy ny fanehoan-kevitra mba hanaovana fanadihadiana avy hatrany ny mikasika ny fakàna an-keriny an'ilay mpianatra 22 taona.
Ahitana teny faneva manohana an'i Gaza, vaovao sy fanehoan-kevitra momba ny ady Israeliana ao Gaza, ary koa fiampangana goavana ny filoha Hosni Mubarak sy ny sampam-piarovana Ejiptiana ny bilaogin'i Gad, Sawt Ghadib,
Tamin'ny Zoma kosa ny fisamborana ireo bilaogera hafa, raha nitazona mpikatroka politika sy bilaogera Ejiptiana-Alemana nandritra ny diabe ho fanohanana an'i Gaza akaikin'i Kairo ny polisy. Nanangana pejy habaka manokana momba ny fanafihan'ny Israeliana ao Gaza i Philip Rizk.
Tamin'ny alatsinainy 09 febroary 2009, sy araka ny fanambarana mitokana, nitatitra ny AHNRI fa niditra an-keriny tao an-tranon'i Rizk ny mpitandro filaminana mba hitady azy ary nangataka tamin'ny rain'i Rizk mba hiaraka amin'izy ireo any amin'ny biraony:
Egyptian police threatened to use force on Rizk's father, also a dual national, if he refused, but was dissuaded by the presence of a lawyer from the Network and an official from the German embassy
Nandrahona hampiasa hery amin'ny rain'i Rizk, mizaka ny zom-pirenena roa ihany koa, ny polisy Ejyptiana raha mandà izy, saingy voasakan'ny fisian'ny mpisolovava iray avy amin'ny Tambajotra sy manampahefana avy amin'ny Masoivoho Alemana
Nikarakara fihetsiketsehana mitaky ny fahalalahan'i Rizk ny tontolon'ny bilaogy Ejyptiana, nanangana bilaogy mitaky ny famotsorana azy ao amin'ny philiprizk.org ary manaparitaka vaovao farany mikasika ny fisamborana azy ao amin'ny tolotra fibilaogina madinika Jaiku.